Ra’iisul Wasaare Rooble oo ugu baaqay Bulshada rayidka ah in ay ka qeyb qaataan Gurmadka Abaaraha – Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya
Waxaa la qoray December 13, 2021
Ra’iisul Wasaare Rooble oo ugu baaqay Bulshada rayidka ah in ay ka qeyb qaataan Gurmadka Abaaraha
Muqdisho, December 13, 2021; Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble oo kulan la yeeshay qaar ka mid ah Ururada bulshada Rayidka ah ayaa ugu baaqay in ay u istaagaan gurmadka dadka ay saameeyeen abaaruhu.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay in deegaanno badan oo kamid ah gobollada dalka ay saameyn ba’an ku yeelatay abaartu, taasna ay waajib ka yeelayso in muwaadin kasta oo Soomaaliyeed uu ka qeyb qaato gurmadka degdegga ah ee loo fidanayo walaalaha dhibaateysan.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa xusay doorka muhiimka ah ee Bulshada Rayidka ah ay ku leeyihiin gurmadka xaaladaha degdegga ah ee ka dhaca dalka iyo garab-siinta dadkeenna nugul, waxa uuna tilmaamay in xilligan baahi weyn loo qabo sidii loo mideyn lahaa, loona dardar gelin lahaa gurmada abaaraha ka jira dalkeenna.
Kulanka oo ay goob joog ka ahaayeen Xubnaha Guddiga Gurmadka abaaraha ee uu dhawaan magacaabay Ra’iisul Wasaaruhu, ayaa laga dhegaystay warbixinno muujinaya heerarka kala sareynta abaartu ay ku reebtay gobollada ay ku dhufatay.
Qormadii HoreHore Ra’iisul Wasaare Rooble oo furay Shirka Wadatashiga ee Taabbagelinta Geeddi-socdka Dowladnimada Xilliga Kala-guurla
Qormada XigtaKu Xiga Ra’iisul Wasaare Rooble oo si diirran loogu soo dhaweeyey Jabuuti